Ihe ọ Pụ Pụ painiapia nke Tesco 1L | Nzipu ohia otu ubochi - Lewisham Ihe ọ Pụ Pụ painiapia nke Tesco 1L- Ordrs
Ihe ọ Pụ Pụ painiapia nke Tesco 1L
100% EGO Dị Ọcha E si na pineapro isii mara mma a họpụtara na elu nke oke ntorobịa Ndị mmekọ anyị na-eme ihe ọ juiceụ juiceụ na Somerset maka ihe karịrị afọ 6. Ha na-eji nka ha ahọta ndi kachasi nma, na nkpuru oke uto. Anyị na-etinye uche anyị bụ naanị nke ahụ. Mmiri dị ọcha, ihe ọ ,ụ brightụ na-egbuke egbuke, kwụ ọtọ site na mkpụrụ osisi ahụ. Onweghị ihe agbakwunyere. Enweghị ihe ọ bụla.